Tag: data an'ny mpanjifa | Martech Zone
Tag: data an'ny mpanjifa
Zoma, Aprily 9, 2021 Zoma, Aprily 9, 2021 Jeff Beck
Ny taon-dasa dia nisy fiantraikany teo amin'ny indostria, ary mety ho eo am-piandohan'ny fifanolanana fifaninanana ianao. Miaraka amin'ny CMO sy ny sampan-draharahan'ny varotra sitrana tamin'ny herintaona nividianana vola lany, izay ampanjarianao ny dolarao amin'ny varotra amin'ity taona ity dia afaka mamerina anao ao anatin'ny tsenanao. Izao no fotoana hividianana vola amin'ny vahaolana teknolojia enti-mandeha tsara hanalana hevi-baovao momba ny marketing. Tsy efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina rindrina misy kojakojam-panaka tsy mitovy miaraka amina loko efa voafidy izay mifandona (vahaolana eny ivelan'ny talantalana),
Alatsinainy Janoary 27, 2020 Alatsinainy Janoary 27, 2020 Douglas Karr
Isan-taona, ny Chief Chief Officers dia manohy maminavina sy manery ny paikady hitany fa mirongatra ho an'ny mpanjifany. Ny PAN Communications dia manao asa be foana amin'ny fanangonana sy fizarana fatratra an'ity vaovao ity - ary tamin'ity taona ity dia nampidirin'izy ireo ity sary manaraka ity, Préditions CMO 2020, mba ho mora kokoa. Na dia toa tsy misy farany aza ny lisitry ny fanamby sy ny fahaiza-manao dia mino aho fa afaka ampangotrahana kely amin'ny olana telo samy hafa izy ireo: Fanompoana tena
Zoma Janoary 10, 2020 Talata, Novambra 10, 2020 Douglas Karr
Rehefa mifampiresaka sy mamorona fifanakalozana amin'ny orinasao ny mpanjifa anio, dia mihasarotra hatrany ny mitazona ny fomba fijery afovoan'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy. Nihaona tamin'ity maraina ity aho niaraka tamin'ny mpanjifanay izay tojo fahasarotana ihany. Ny mpivarotra marketing mailaka azy ireo dia samy hafa amin'ny sehatra fandefasan-kafatra finday any ivelan'ny toerana fitahirizany data. Nifampiresaka ny mpanjifa fa satria tsy niraikitra ny angona afovoany dia indraindray nateraka na